Baolina kitra - "Mondial 2022" :: Mihemotra amin’ny septambra ny lalaon’ny Barea sy Benin • AoRaha
Baolina kitra – « Mondial 2022 » Mihemotra amin’ny septambra ny lalaon’ny Barea sy Benin
Tapaka ny hevitra. Nanamafy ny fihemoran’ny dingan’ny fifanintsanan’ny fiadiana ny amboara maneran-tany na ny “Mondial 2022” ny Kaonfederasiona Afrikanan’ny baolina kitra (CAF), omaly, tamin’ny fanambaràna navoakan’izy ireo. Fanamafisana ny fikasan’ny fivoriana maikan’ny CAF tamin’ny alatsinainy izany.
“Efa nisy ny fifampiresa- hana tamin’ny Federasiona iraisam-pirenena (Fifa) ka neken’izy ireo izany vinavina, izay saika niandrasana ny fivorian’ny komity mpanatanteraka, izany”, araka ny voalazan’ny fanambaràna. Noho ny olana eo amin’ny kianja maro eto Afrika ny anton’ny fihemorana. Tsy misy afa-tsy firenena roa amby roapolo amin’ireo enina amby dimampolo mpikambana amin’ny CAF mantsy no manana kianja manara-penitra hahafahana mandray lalao iraisam-pirenena.
Ny volana septambra, oktobra, novambra 2021 ary marsa 2022 no fandaharam-potoana vaovao navoakan’izy ireo, raha tokony ho tamin’ny jona 2021 no nanombohana ny andro voalohany sy faharoa. Ankoatra ny tsy fahampian’ny kianja, voalazan’ny fanambaràna, dia heverina fa ny mbola fiparitahan’ny valanaretina Covid-19 amin’ny endriny vaovao aty Afrika no isan’ireo antony nangatahana an’izao fampihemorana tany amin’ny Fifa izao.
Ho an’i Madagasikara manokana, efa nahazo fankatoavana avy amin’ny CAF ny kianja Barea Mahamasina sy ny kianjan’i Barikadimy Toamasina fa afaka mandray ireo andro roan’ny fifanintsanan’ny “Mondial 2022”.
Toy izao kosa ny fandaha- ran-dalao vaovao ho an’ny vondrona J, misy an’i Madagasikara. Handray an’i Benin eto an-toerana ny Barea alohan’ny hanafihana any Tanzania, amin’ny septambra 2021. Aorian’izay no hiatrika lalao mandroso sy miverina amin’i Repoblika Demokratikan’i Congo ny Malagasy, ny oktobra 2021. Handranto fihaonana any Benin ary hampian- trano andry zareo Tanzaniana indray ny ekipam-pirenena malagasy, amin’ny novambra 2021. Raha afaka amin’ireo dia miroso avy hatrany amin’ny lalao mandroso sy miverina amin’ny lalao sakana hahafahana mamaritra an’ireo firenena dimy farany hisolo tena an’i Afrika.
Mahatsara ny Barean’i Madagasikara ity fihemoran’ny lalao ity satria manam-potoana tsara hanomanana Rabesandratana Eric, mpanazatra vaovaon’ny ekipam-pirenena malagasy, ary afaka mifantina malalaka ireo mpilalao handrafitra ny Barea, na ireo avy eto antoerana na ireo mpila ravinahitra. Ho tapitra amin’ny volana mey rahateo ny fifaninanana any ivelany ka tsy miverina raha tsy amin’ny volana aogositra. Fotoana tokony hikarakarana fampivondronana an’ireo mpilalao any ivelany sy eto an-toerana izany.
Rugby vehivavy – Lalao tsapa :: Nifandimbiasana ny fandresena teo amin’ny Makis sy Tonizia